News – Page 17 – aajnepal
[ February 23, 2019 ] मानिसको मृत्यु हुनु अघि देखिने ९ लक्षण	Rochak
[ February 23, 2019 ] पिपलमा विधिपूर्वक पुजाआजा गर्दा घरमा सुख शान्ति आउँछ, के हो पूजा गर्ने विधि ? पढ्नुहोस्	Rochak
[ February 23, 2019 ] ५ दिनमै ५ किलो तौल घटाउने यो १०० प्रतिशत प्राकृतिक र प्रभावकारी ड्रिंक, एकपटक सेवन गरेर हेर्नुहोस्	Health
[ February 23, 2019 ] यौनजोडीको लागी खुशीको खबर ! यौन आनन्दका लागी आयो विशेष पेस्ट	Rochak
[ February 23, 2019 ] अध्यागमनमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको हस्तक्षेप	News
एसियाकै धनाड्य मुकेश अम्बानीका छोराछोरीले कति पाउथे पकेट खर्च ? सुनेर पर्नु छक्क हुनेछ रोचक ख
February 2, 2019 aajnepal 0
काठमाडौं । एसियाकै सबैभन्दा धनाड्य व्यक्ति मुकेश अम्बानीको लाईफ स्टाईल कुनै राजा महाराजाले भन्दा कम छैन। अम्बानीकी पत्नी निता आइपिएलकी मलिक हुन् र बेला बेलामा उनि सामाजिक संजालमा चर्चामै रहने गर्छिन्। तर एसियाकै सबैभन्दा धनाड्य […]
प्रचण्डकाे विज्ञप्तिपछि असन्तुष्ट बनेका अमेरिकी राजदुत सरकारले बोलाएको ‘कूटनीतिक ब्रिफिङ’मा आएनन्
काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार बोलाएको कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी आएनन्। भनेजुएलाको राजनीतिक संकटका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विज्ञप्तिपछि असन्तुष्ट बनेको अमेरिकाका राजदूतको अनुपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कूटनीतिक […]
माया त कति लाग्छ लाग्छ, तर पनि अब हामी सँगै जिन्दगी बिताउन सक्ने अवस्थामै रहेनौं !
February 1, 2019 aajnepal 0
‘तिमीले महिलाको मात्र हैन, पुरुषका बारेमा पनि लेखेको देख्छु, आज मलाई तिम्रो सहयोग चाहिएको छ, मिल्छ भने आजै भेटाैं न ।’झण्डै एकवर्षसम्म भेट हुन नपाएको एकजना पत्रकार साथीले अस्ति फोन गरेर अत्तालिँदै यसो भने । […]
धुर्मुससुन्तली फाउन्डेसनलाई दिइएको जग्गाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
काठमाडौं : मुद्दाको किनारा नै नलागी भरतपुर महानगरपालिकाले २० बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा रंगशाला निर्माण गर्न सम्झौता गरेको हो। फाउन्डेसन र उक्त महानगरबीच रंगशाला बनाउन सम्झौता भएपछि विवाद भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको जग्गामा […]
कक्षा २ मा पढ्ने यी ६ वर्षका बालकलाइ स्कुल पुग्न र घर फर्किन ८ घण्टा लाग्छ
अर्घाखाँची: सुन्दर बलाल ६ वर्षका भए। शीतगंगा नगरपालिका–१० सिद्धारा तारिकेका उनी २ कक्षामा पढ्छन्। उनी अक्षर चिन्दै छन्। तर यसका लागि सुन्दरले तिरेको मूल्य हिसाब गरेर साध्य छैन। हरेक दिन स्कुल आउजाउ गर्न उनलाई आठ […]
सभामुख महरा आज दाङ आउँदै
घोराही । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा आज दाङ आउँदै छन् । घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको भोली हुुन थालेको साधारणसभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन महरा दाङ आउन थालेका हुन् । आज रोल्पा […]
निवस्त्र घरको काम गर्ने कर्मचारी खोज्दै युरोपका देश, एक घण्टाको ७ हजार तलब
एजेन्सी, विश्वको यस्ता ठाउँहरु छन्, जहाँ अचम्मका रोजगारको अवसरहरु दिइन्छन् । यस्तै अनौठो सर्त अनुसार कर्मचारीको माग गर्दैछन् युरोपका देशहरु । उनीको घरमा सरसफाइ गर्ने युवायुवतीले निवस्त्र काम गर्नु पर्ने उनीहरुको सर्त रहेको छ । […]
देशको चिन्ता लिनुपर्ने दिन कहिल्यै आउँदैन, सरकारले चौतर्फी तीव्रगतिले काम गरेको छ : प्रम ओली
दमक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको चिन्ता लिनुपर्ने दिन कहिल्यै नआउने बताउनुभएको छ । सरकारले देशको समृद्धि र विकासको एजेण्डामा क्रियाशील भएर काम गरेको जोड दिँदै प्रम ओलीले अब कसैले देशको चिन्ता लिनुपर्ने दिन कहिल्यै […]
‘डा. केसीलाई जसले बोकेको छ उसैले नै अनशन ताेडाउन सक्छ
सरकारले डा. गोविन्द केसीको अनशन तोडाउने काम उनलाई बोक्नेकै भएको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले केसीको अनशन तोडाउने काम उनलाई बोक्नेकै जिम्मा भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । बिहीबार […]
जापान रोजगारी : यसकारण गरिँदैछ कामदार पठाउन ‘गोप्य’ छलफल
January 31, 2019 aajnepal 0
रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मानिएको जापानमा नेपाली कामदार पठाउन छलफललाई तीव्रता दिइएको छ । नेपाली र जापानी पक्षबीच कामदार पठाउनेबारे गम्भीर ढङ्गले गृहकार्य चलिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यस विषयमा […]
मानिसको मृत्यु हुनु अघि देखिने ९ लक्षण
पिपलमा विधिपूर्वक पुजाआजा गर्दा घरमा सुख शान्ति आउँछ, के हो पूजा गर्ने विधि ? पढ्नुहोस्
५ दिनमै ५ किलो तौल घटाउने यो १०० प्रतिशत प्राकृतिक र प्रभावकारी ड्रिंक, एकपटक सेवन गरेर हेर्नुहोस्
यौनजोडीको लागी खुशीको खबर ! यौन आनन्दका लागी आयो विशेष पेस्ट
अध्यागमनमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको हस्तक्षेप